आत्मकथा लेख्नेले आत्मरति नगरून्, बीपीबाट सिकून्
मलाई विभिन्न समयमा भेटेर वा फोन गरेर लेखनमा रुचि राख्ने भाइबहिनीहरूले प्रश्न गर्छन्– आत्मकथा कसरी लेख्ने ? त्यसका लागि चाहिने स्रोतहरू कसरी भेला गर्ने ? प्रश्न सुन्दा सजिलो लागे पनि उत्तर जटिल छन् । साहित्यका विभिन्न विधाभित्र उपविधाहरू पनि थपिने क्रम जारी छ । परम्परागत विधाहरूले मात्र अब लेखकहरूलाई यथेष्ट हुन छोडेको छ । लेखन प्रयोगहरू विधामाथि पनि खेलिरहेका देखिन्छन् ।
यसो हेर्दा साहित्यका अन्य विधाहरूभन्दा आत्मकथा लेख्न सजिलो होलाजस्तो पनि लाग्छ । आफ्नो कुरा त हो फररर लेखे भइहाल्यो । कल्पना गर्नु परेन, नचाहिने पात्र र घटनाहरू खोजिरहनु पनि परेन । आफ्नै जीवनमा जोडिन आएका अनगिन्ती व्यक्ति र वस्तुहरू पात्र बनेकै हुन्छन्, इत्यादि । तर, यो यसरी सोचेजस्तो सजिलो कुरा हैन । मलाई त लाग्छ– साहित्यमा लेख्न गाह्रो भनेकै आत्मकथा हो ।
त्यसो त खुबै सजिलो पनि फेरि यही हुन सक्छ । हामी त्यसलाई केका लागि र किन लेख्छौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यदि हामी आत्मप्रशंसाका लागि, आफ्नो पारिवारिक इतिहासको सुन्दर पक्षलाई मात्र बाहिर ल्याउन चाहन्छौँ भने यो लेख्न केही गाह्रो हुन्न । धेरै सोचिरहनु पनि पर्दैन । तर, आफ्नो, परिवारको, समाजको यथार्थ चित्रण गर्न चाहेको हो भने अब लेख्नु एकदम नै गाह्रो कुरा हुन्छ । अनि लेखकको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा पनि यहीँ हुन्छ । ऊ आफ्नो लेखनमा कत्तिको इमानदार छ, कत्तिको निर्भीक छ, कत्तिको सरल र साहसी छ भन्ने कुरा उसले आफ्नाबारेमा लेखेको कृतिबाट मात्र थाहा पाउन सकिन्छ ।
यो काम सजिलो नभएकैले नेपाली साहित्यमा आत्मकथाहरू भनेजस्तो आउन सकेका छैनन् । फाट्टफुट्ट जे–जति आएका छन्, तिनमा पनि आत्मप्रशंसा र परनिन्दाको मात्रा अत्यधिक हुन्छ । पछिल्लो कालमा धेरैजसो आत्मकथाहरू अवकाशप्राप्त निजामती तथा जङ्गी सेवाका कर्मचारीहरूद्वारा लेखिएकाहरू बजारमा देखिन्छन् । अधिकांश आत्मकथामा लेखक आफ्नो सेवाकालमा अत्यधिक इमानदार र नैतिक रहेको, आफूले कसैलाई पटक्कै हानि नपुर्‍याएको तर अरूले आफूलाई भने खुट्टै टेक्न नदिएको जस्ता बखानहरूले ४/५ सयजति पानाहरू भरिएका हुन्छन् । जुन कृतिहरू पढ्दापढ्दै पाठक किताबको बीचैबाट निस्किन्छ ।
पश्चिमी साहित्यमा उपन्यासपछि सबैभन्दा लोकप्रिय भनेकै आत्मकथा हो । देशका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिहरूले पनि बडो सन्तुलित पाराले आफ्ना कुराहरू लेखेका हुन्छन् जसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र इतिहासमा समेत गहिरो प्रभाव पार्ने गर्दछ ।
मानिसलाई लाग्ने सबैभन्दा गाह्रो काम भनेको आफ्नाबारेमा नढाँटी भन्नु हो । यो आफैँलाई आफूले गरेको भयानक चुनौती पनि हो । आफ्नो बारेमा भन्दा त्यहाँ आफू मात्र नभएर अरुहरू पनि उत्तिकै जागेर आउँछन् । तिनको कुरा नभनी किताब अघि बढ्दैन, तिनका बारेमा भनौँ भने गाह्रो हुन्छ । आफ्ना कमजोरीहरू नै भन्न नसक्नेले अर्काका बारेमा त झन् कसरी लेख्न सक्दो होला त नि !
आत्मकथा लेख्न बस्नुभन्दा अघि लेखकले आफूभित्रबाट आफ्ना अहम्, स्वाभिमान, लाज, डर, मान, अपमानसम्बन्धी धारणालाई फुकालेर केही समय कतै कुनामा थन्क्याउन सक्नुपर्छ । आफूले लेखेको कुराप्रति पूर्ण इमानदार हुन सक्नुपर्छ । आफूले लेखेबापत भोलि कुनै विवाद आएमा त्यसका लागि जवाफदेही हुन सक्नुपर्छ । आफ्नो लेखनसँग सम्बन्धित दसीप्रमाण वा साक्षीहरू सुरक्षित राख्न सक्नुपर्छ । आफ्नो लेखन आफ्नै व्यक्तिगत बखान र पारिवारिक प्रशंसाको पुलिन्दा नबनोस् भन्नेमा सतर्क हुन सक्नुपर्छ ।
प्रत्येक व्यक्ति ऊ समाजको इकाइ पनि हो । त्यसैले उसले भोगेको जीवन उसको मात्र नभएर समाजको सूक्ष्म अंश पनि हो । एउटा व्यक्तिका तमाम अनुभव र अनुभूतिहरू समाजबाटै उत्पन्न परिस्थितिहरू हुन् । तसर्थ आत्मकथा समाजको कथा पनि बन्न सक्नुपर्छ । त्यसमा त्यस समयको आफू, आफ्नो समाज र देश देखिन सक्नुपर्छ । कुनै खास समयमा गोप्य राख्न वा रहन बाध्य सन्दर्भ लेखनकालमा सार्वजनिक हुन सक्नुपर्छ । कुनै पनि आत्मकथा पढिसकेपछि पाठकले त्यसभित्र आफूले भोगेको समय र युग भेट्न सकोस् । त्यसमा सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक अनेक पाटाहरू खुलून् ।
यस्ता कुरा लेख्न सम्झना मात्र काफी हुँदैन । त्यसका लागि हरेक घटना, पात्र र विषयहरूबारे आफूले सतर्कतापूर्वक राखेका तथ्यांक र अभिलेखहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । त्यसैले आत्मकथा लेख्न चाहने व्यक्तिले कुनै न कुनै प्रकारको डायरी लेखनलाई निरन्तरता दिएको हुनुपर्छ । डायरीले त्यस कालको तथ्यलाई सुरक्षित राखेको हुन्छ । आफ्नो कुरा लेख्न अरुसँग सोध्नुपरेमा त्यो लेखनमाथि आफ्नो पूर्ण विश्वास बस्न सक्दैन । भोलि कसैले प्रश्न उठाएमा जवाफ दिन नसक्ने भइएमा त्यो लेखन जीवनको कुनै खास कालखण्डमा आफ्ना लागि आफैँले खनेको खाल्डो हुन जान्छ ।
धेरै मानिसहरूले डायरी लेख्ने गरेका हुन्छन् तर ती त्यति बाहिर आउँदैनन् । तिनमा कैयौँ आफ्ना एकदमै निजी कुराहरूसमेत लेखिने हुनाले ती त्यसै कतै थन्किन्छन् । कालान्तरमा कुनै असल शिल्पीको हातमा परे पुस्तकका रूपमा आउन पनि सक्छन् ।
आत्मकथाका बारेमा भन्नुपर्दा म प्रायः बीपी कोइरालाका किताबहरूको चर्चा गर्ने गर्छु । नेपाली साहित्यमा आएका एकदमै थोरै, तथ्यपूर्ण र इमानदार लेखन गरिएका कृतिहरू हुन् बीपीका । उनका उपन्यास र कथाहरू यथार्थका नजिकमा भए पनि तिनमा काल्पनिकता प्रचुर पाइन्छ तर जब उनका आत्मकथाहरू पढ्न थालिन्छ, त्यहाँ हामी एउटा अत्यन्त इमानदार लेखक भेट्न थाल्छौँ । आफ्नो कथा, आत्मवृत्तान्त, जेल जर्नल र फेरि सुन्दरीजल बीपीका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण आत्मकथात्मक कृतिहरू हुन् । आत्मकथा लेख्न चाहनेले उनका यी कृतिहरू केही पल्ट छिचोल्नु उचित हुन्छ ।
आफू देशको अत्यन्तै जिम्मेदार व्यक्तिको रूपमा स्थापित भइसकेको भए पनि लेखनकालमा उनले आफूलाई नेपाली कांग्रेसको नेता, क्रान्तिकारी आदि केही पनि सम्झेको देखिँदैन । आत्मप्रशंसाभन्दा विषयको गम्भीरताप्रति उनको दृष्टिकोण बनेको हुन्छ । कसैका बारेमा आलोचना गर्नुपर्दा पनि कारणसहित र तथ्यपूर्ण हुन्छन् । आफूप्रति इमानदार हुन सक्नेले नै अरूमाथि पनि लेखनकालमा न्याय गर्न सक्छ । जीवनका कठिनाइ र द्वन्द्वका बीच पनि निष्ठालाई नत्याग्नु उनको विशेषता देखिन्छ । उनको आफ्नो कथाभित्रका संस्मरणहरू बाल्यकालका हुन् तर ती यति महत्त्वपूर्ण छन् कि तिनले कोइराला परिवारका दुर्दिन कसरी आए भनेर इतिहासको डरलाग्दो कालखण्डको उद्घाटन गरेको छ ।
डायरी लेखनको सुन्दर उदाहरण हुन सक्छ बीपीकै जेल जर्नल । १ पुस २०१७ मा राजा महेन्द्रको राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाले ल्याएको दुर्घटनापछि उनलाई आठ वर्षसम्म सुन्दरीजल जेलमा राखिएको बेलाका सुरुका दिनमा लेखिएको त्यो डायरीका कुराले त्यसपछिको राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अघि बढेको थियो भन्ने थाहा हुन्छ भने अहिलेको बहालवाला प्रधानमन्त्री भरे नै कालकोठरीमा पुग्दा कस्तो भयो भन्ने देख्न सकिन्छ ।
कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंहलगायत कांग्रेसका नेता तथा मन्त्रीहरू सबै थुनामा परेको बेला आफूआफूमा पनि के–कस्ता व्यवहार भए, एकर्कामा के–कस्ता शंका उपशंकाहरू हुन्थे, सानासाना कुराहरूमा पनि मानिस कसरी पितुक्र्या हुन्छ भन्ने कुरा त्यो डायरीबाट थाहा हुन्छ । त्यो कुनै साहित्यिक कृति बनाउने उद्देश्यले नलेखिएको हुँदा त्यहाँ मानव मनका तमाम कमजोरीहरू पनि देख्न सकिन्छ ।
हामी कसैलाई पनि भविष्यमा आत्मकथा लेख्न मन भए आजैदेखि डायरी लेख्न थाल्नु उचित हुन्छ । मैले २०३७ सालदेखि डायरी लेख्न थालेको थिएँ । जसले पछि मलाई आधा बाटो र पाण्डुलिपि लेख्न मद्दत गर्‍यो । म आज पनि आफ्नो डायरी लेख्ने काम गरिरहन्छु ।
मानिसको अनौपचारिक जिन्दगी लिपिवद्ध हुने हो डायरी भनेको । त्यस कालका ती विचार र घटनाहरू भविष्यका लागि इतिहासका समिधा बन्नेछन् । बीपी त ठूला मानिस थिए, हाम्रो के होला र भन्ने पनि लाग्छ । त्यस्तो लाग्नु स्वाभाविकै हो तर हामी प्रत्येकले भोगेको जिन्दगी आफ्ना लागि बीपीको जिन्दगी उनका लागि महत्त्वपूर्ण भएजत्तिकै हो । कुनै कालमा त बीपी पनि हामी सबैजस्तै साधारणभन्दा साधारण मानिस नै थिए । इतिहासको कुनै कालखण्डको उनी बिम्ब बनेका हुन् । आफ्नो अठसट्ठी वर्षको जीवनकालमा प्रधानमन्त्री भएको जम्मा सोह्र महिना मात्र उनले केही शान्तिको सास फेरे होलान्, नत्र सारा जीवन क्यान्सरजस्तो रोग र निरङ्कुशताका विरुद्ध लडेरै बितेको छ ।
जेल जर्नलभित्र उनको मनोदशाका केही उदाहरण हेर्न सक्छौँ:
नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिएका स्व. कोइरालाका छवटा उपन्यास, दुईवटा कथासङ्ग्रह र चारवटा आत्मकथा छन् । तीमध्ये उनको जेल जर्नलमा २०१७ सालको राजनीतिक परिवर्तन, राजा महेन्द्रको अप्रत्याशित षड्यन्त्र, पार्टीका साथीहरूले दिएका थोरबहुत जेलयातनाका बेलाका तीता अनुभव, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति आदि विषयमा आफ्ना धारणाहरूलाई स्पष्ट पारिएको छ ।
भविष्यमा प्रकाशित गर्ने कुनै उद्देश्य नराखी लेखिएको हुनाले यसमा एकदमै निजी विषयहरू पनि उल्लेख छन् । पाण्डुलिपिलाई यत्रो वर्षसम्म सुरक्षित राखी उनको निधनपछि प्रकाशन गराउन विशिष्ट भूमिका निर्वाह गर्ने अधिवक्ता गणेशराज शर्माले कुनै सामान्य सम्पादन पनि नगरेकाले कतिपय ठाउँमा उस्तै कुराहरू प्रशस्त दोहोरिएका छन् । जे भए पनि विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला वास्तवमा को रहेछन् र उनको आन्तरिकता कस्तो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउन यो पुस्तक एकदमै उपयोगी छ । उनका बारेमा प्रचार भएका अनेकौँ आरोप र अफवाहहरूलाई यस पुस्तकले निवारण गरेको छ ।
आफ्नी पत्नी श्रीमती सुशीला कोइरालालाई सम्बोधन गरी लेखिएको यो डायरीमा नेपाली राजनीतिको एक शिखर पुरुषको जीवनभित्र उठेका आँधीतुफानहरू पढ्न सकिन्छ । जन्मदै राजनीतिक संकटले ग्रस्त भएको पारिवारिक वातावरणमा जन्मिएका कोइराला जसको सम्पूर्ण समय राजनीतिमा बितेको थियो । देशमा १ सय चार वर्ष पुरानो राणाशाहीको अन्त्य गरी प्राप्त गरेको प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्न आठ वर्षसम्म पुनः संघर्ष गरी सम्पन्न भएको पहिलो आमनिर्वाचनको परिणामबाट प्राप्त दुईतिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्री बनेका थिए उनी । राम्रोसँग सत्तामा खुट्टासम्म पनि टेक्न नपाउँदै राजा महेन्द्रले षड्यन्त्रपूर्ण सत्ता कब्जा गरी उनलाई जेल पठाएका थिए ।
बीपी आफ्नो डायरीमा श्रीमतीलाई सम्बोधन गर्दै लेख्छन्ः
‘२०१७ साल पुस १ गतेको शाही कदमपछि प्रजातन्त्रवादी युवाहरूले देखाएको साहसी विद्रोहको निम्न उदाहरण उल्लेख्य छः
क) तिमीले त्यो घटनाका सम्बन्धमा सुनिसकेकी हौली कसरी शैलजा, उसकी साथी विजया बराल र अन्य युवकयुवतीहरूले ठीक सलामीको मञ्चअगाडि प्रदर्शन गरे, जसरी जिन्दावादको नारा लगाए, कसरी सलामी ग्रहण गरिरहेका व्यक्ति हदप्रद भए, कसरी प्रदर्शनकारीहरूलाई नराम्रोसँग व्यवहार गर्दै लगे....., यो एउटा बडो साहसको कार्य थियो । जुन साहसलाई आफ्नो महान् लक्ष्यका लागि मानिसले जीवनमा कहिलेकाहीँ मात्र प्रदर्शित गर्छ । नेपालको इतिहासमा साहसका कार्यहरूको उल्लेख धेरै भएका छन् । यो अनुनय साहसको कार्य त्यस नेपाली परम्पराको एउटा उज्ज्वल हिस्सा भएको छ..........। मेरो हृदयमा शैलजा र विजया एउटा ज्योतिको रूपमा टलक्क टल्किएका छन् । (पृष्ठ १५–१६)
देशमा प्रजातन्त्रको हत्या गरी सम्पूर्ण प्रजातन्त्रबादी शक्तिलाई जेलमा कैद गरेर सत्ताभोग गरिरहेका राजा र राजसंस्थाबारे बीपीको धारणा कत्ति पनि परिवर्तित देखिँदैन । जस्तैः
‘देश र व्यक्तिको परवाह नगरेर यो घोषणा गर्ने इच्छा हुन्छ कि नेपालमा गणतन्त्र अब आवश्यक भएको छ तर, क्रोधको वेगमा देशको चिन्तन सम्भव हुँदैन । क्रोधमा आएको यो विचार पौष १ को शाही कदम निहित विचारजस्तै मूर्खतापूर्ण र स्वार्थपरायण हो । राजाको स्थान हाम्रो राजनीतिमा के हुनुपर्छ भन्ने मेरो विचारमा १ पौषको घटनाले परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन ।’
आफ्नै पार्टीका साथीले दिएको सास्तीबारे उनले लेखेका छन्ः
‘सूर्यबाबु यहाँ जेलमा हुइञ्जेल मेराउपर सीआईडी र राजालाई एकएक खबर पठाउनुहुन्थ्यो । छुटेर गएपछि हाम्रा साथीहरूलाई भड्काउने काम गर्नुहुन्छ । मेरोविरुद्धमा त ठूलो प्रचार भित्रभित्र साथीहरूका बीचमा थाल्नुभएको छ.........। सूर्यबाबु निम्न श्रेणीको व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने त हामी सबैलाई थाहा थियो । तर, मलाई यस प्रकारको पतित र अधम हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास थिएन । हर दृष्टिबाट उहाँ सानो कदको हुनुहुन्छ । जेलभित्र साथीहरूको बीचमा सीआईडीको काम गर्नु एउटा अक्षम्य राजनीतिक अपराध हो ।' (पृष्ठ २५)
जेलभित्र एकै ठाउँ बस्न बाध्य केही मान्छेहरूको उद्दिग्नता र कमजोर मनस्थितिको अर्को सानो नमुना तल हेरौँ:
‘आजको दिन आफ्नो उत्तेजनापूर्ण प्रभाव नपारी रहँदैन । एक त म नै उत्तेजित भएँ, जब किसुनजीले जर्नेललाई उनीहरूको अनियमिततालाई संकेत गर्दै भन्नुभयो कि कल्पना भतिजी कसरी मसँग भेट्न पाई, जबकि उनीहरूको नियमअनुसार भतिजाभतिजीहरूले भेट्न पाउँदैनन् । उहाँको तात्पर्य थियो– सरकारको अनियमितता प्रमाणित गर्ने । तर, परिणामको ख्याल नगरेर सायद उहाँले रोशाहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्नुभयो । हुन सक्छ, उनीहरूले कल्पनालाई मेरी छोरी भनेर भेट्न पठाएका थिए होलान् । मलाई किसुनजीको यस्तो हुस्सुपनमा बडा रिस उठ्यो । बडा सुपरफिसियल रियाक्सन हुन्छ उहाँमा ।’
किसुनजीको जे कुरालाई पनि हल्काफुल्का पाराले लिने बानी पुरानै रहेछ भन्ने बीपीको यो लेखाइले सावित गर्छ । किसुनजी पछिसम्म पनि बारम्बार हलुका अभिव्यक्तिहरूका कारण विवादमा परिरहनुहुन्थ्यो ।
बीपीको यो कृति एउटा यस्तो कृति हो, जसमा उनीभित्र रहेका विशृंखलित भावहरू जेलको चार दिवारीभित्र छटपटाएका छन् । विभिन्न मितिका विभिन्न मनोदशाअनुसार विचारहरूको अनुभूति भएको छ । एउटा प्रजातन्त्रवादी उत्कृष्ट चिन्तक र नेता भएर पनि प्रजातन्त्रका अवगुणहरूलाई उदारता र सहजतापूर्वक यसरी व्यक्त गरिएको देखिन्छ । जस्तैः
– प्रजातन्त्रमा राजनीतिक हत्या सजिलो हुन्छ, तानाशाहीमा यद्यपि तानाशाहले आफ्नो उसको हत्याका लागि धेरै मसला स्वयम् जोडेको हुन्छ । आफ्नो अत्याचार, दमन र व्यक्तिगत शासनको उसमाथिको व्यक्तिगत जिम्मेदारीले गर्दा त्यो गाहारो ।
– प्रजातन्त्र कानुनको राज्य भएकाले हत्यारालाई कानुनी अधिकार प्राप्त छ, जसबाट उसलाई फुत्किने सम्भावना हुन्छ ।
– केवल हत्यारा मात्र हत्याको जवाफदेही हुन्छ प्रजातन्त्रमा न कि उसका परिवार र मित्रवर्गहरू पनि जस्तो कि तानाशाहीमा हुन्छ ।
– प्रजातन्त्रमा चुनिएका शासकको अत्यधिक सुरक्षा राम्रो कुरो मानिदैन ।
– प्रजातन्त्रमा व्यक्तिगत उग्रवाद सम्भव हुन्छ, यद्यपि त्यो प्रणाली उग्रवादमा आधारित हुँदैन । व्यक्तिगत स्वतन्त्रताले व्यक्तिगत पागलपनको व्यवहारको स्वतन्त्रतालाई पनि प्रश्रय दिन्छ ।
आजको नेपाली प्रजातन्त्रमा भइरहेका हत्या र आतङ्कहरूलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न नसकेको वर्तमान अनुभवलाई बीपीका यी अभिव्यक्तिहरूले सावित गरेका छन् । जहाँ पनि, जहिले पनि, जसले पनि जनताका नाममा जनतामाथि नै अत्याचार गर्ने परम्परा भने कायम नै छ ।
बीपीको यस डायरीले नेपालको महेन्द्रकालीन निरङ्कुशताको इतिहास खोल्छ । हामी कसैलाई पनि भविष्यमा आत्मकथा लेख्न मन भए आजैदेखि डायरी लेख्न थाल्नु उचित हुन्छ । मैले २०३७ सालदेखि डायरी लेख्न थालेको थिएँ । जसले पछि मलाई आधा बाटो र पाण्डुलिपि लेख्न मद्दत गर्‍यो । म आज पनि आफ्नो डायरी लेख्ने काम गरिरहन्छु ।
बीपीको यस कृतिले नेपाली राजनीतिभित्रका जुनसुकै पार्टीभित्रका मानिसहरूलाई पनि नयाँ ढङ्गले सोच्न बाटो देखाएको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख २१, २०७८, १४:३८:००